Umaki: i-cart66 | Martech Zone
Izingxenyekazi ze-Ecommerce ezisheshayo zeDeskithophu neselula
NgoMgqibelo, ngoMeyi 14, 2016 ISonto, May 15, 2016 Douglas Karr
Ijubane liyimali. Kulula njengalokho uma kukhulunywa nge-e-commerce. Akubona abathengi kuphela abashiya isayithi lakho uma lingenzi kahle kudeskithophu noma kuselula. Izinga lenjini yokusesha kanye nesivinini sekhasi futhi. Izinjini zokusesha azifuni ukuthi abasebenzisi bakhungatheke lapho bevakashela isayithi elihamba kancane, ngakho-ke akusizi ukuzikala kahle. Uma ngabe ipulatifomu yakho ye-e-commerce ilayisha kancane noma inolwazi olubi lomsebenzisi weselula, ungahle uhambe